MTS Online Radio | ကြိုဆိုပါ၏ … MTS Online Radio သို့လာရောက်လည်ပတ်ကြသောမိတ်ဆွေများကိုနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်။
လေးဘက်နာ နှင့် ဆေးကောင်းတလက်
Rheumatism လေးဘက်နာ လေးဘက်နာဟာ လူရွယ်တွေ သိချင်ကြတဲ့၊ သိသင့်တဲ့ ရောဂါတခုပါ။ ဆေးစာမှာတော့ အနီးစပ်ဆုံးက Rheumatism ဖြစ်ပါတယ်။ Rhumatic အဆစ်နာ၊ Rhumatic အဖျား၊ Rhumatic နှလုံးရောဂါ၊ စတာတွေကို ခြုံခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးက နဲနဲတော့ ခေတ်နောက်ကျသွားပါပြီ။ ရောကော သောကော လုပ်ရာကျနေလို့ပါ။ ဒီအုပ်စုဝင် Arthritis ရောဂါကို ကုရတာနဲ့ Lupus ကို ကုရတာ ဘာမှမဆိုင်အောင် မတူလို့ ရောဂါအုပ်စု တခုထဲ လုပ်ဘို့ … Continue reading →
Youtube to Mp3 Converter ( NO need to install, just online converter webs)
Mp3 သီချင်းများ ကိုသိမ်းထားချင်သူများအတွက် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာသီချင်းကို Youtbe မှာရှာပြီး URL ကို ကော်ပီကူးပါ( ဥပမားhttp://www.youtube.com/watch?NR=1&v=VBmMU_iwe6U ) ထိုနောက် အောက်ပါလင့်မှာထဲမှ သင့်တော်ရာ web link ကိုဖွင့်ပါ။ထိုသို ဖွင့်ပြီးနောက် URL ဆိုတဲ့ဘေးနားက အကွက်ထဲမှာ စောစောက ကူးထားခဲ့တဲ့ Youtube Link ကို Control +V သိုမဟုတ် Right CLick+Paste ကိုနှိပ်ပြီး တဆင့်ချင်းဆက်လုပ်သွားပါ။ အဆင်ပြေပါလ့မ့်မယ်။ http://www.youtube-mp3.org/ http://www.audiothief.com/( Crop … Continue reading →
မလိုလားတဲ့ ဖိုင်တွေရှင်းပေးတယ်။Window မြန်ဆန်စေတယ်။( CCleaner 3.12.1572 )
CCleaner 3.12.1572 CCleaner isafreeware system optimization, privacy and cleaning tool. It removes unused files from your system – allowing Windows to run faster and freeing up valuable hard disk space. It also cleans traces of your online activities … Continue reading →
Hard Drive Speed ပိုမြန်ဆန်စေရန် (Defraggler 2.07.346)
ံ Most defrag tools only allow you to defrag an entire drive. Defraggler lets you specify one or more files, folders, or the whole drive to defragment. When Defraggler reads or writesafile, it uses the exact same … Continue reading →
Avast! Free Antivirus 6.0.1289 Avast! Antivirus represents the best free antivirus protection currently available on the market. This edition is FREE OF CHARGE for non-commercial & home use. Its features include: Anti-spyware built-in Web Shield Anti-rootkit built-in Automatic updates Strong … Continue reading →
Latest Google Chrome 17.0.928.0 Beta
Google Chrome 17.0.928.0 Beta Requirement Space = 23.35MB Chrome ကို နှစ်သက်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Download here >>>>> ဒီမှာနှိပ်မှာ <<<<< ဖိုးလမင်း
Latest Skype 5.5.0.124 Software
Skype Technologies – Requirement Space = 958KB (Freeware) SKYPE နဲ့ အဝေးမှ ချစ်သူမျှား ၊ဆွေမျိုးများကို အင်တာနက်လေလှိုင်းပေါ်မှဆက်သွယ်လိုသူများအတွက်နှင့် Online နဲ့ နေ့မအိပ်ညမအိပ် အီစီကလီနေရသည်ကို သဘောကျသော မိတ်ဆွေများအတွက် အထူးအဆင်ပြေစေရန် Skype 5.5.0.124 Software ကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။အွန်ုလိုင်းသုံးရင်း ကုသိုလ်ယူချင်၇င်တော့ မိမိအွန်လိုင်းသုံးနေစဉ်အတွင်း http://www.buddhafm.net OR http://wma1.viastreaming.net/BDFM/ မှတရားတော်များကို window media Player တွင် Play လုပ်ပြီးနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Download … Continue reading →
Mozilla Firefox 8.0 Software
DOWNLOAD HERE >>>>> ဒီင်္မှာနှိပ် <<<< Title: Firefox 8.0 Filename: Firefox Setup 8.0.exe File size: 14.07MB (14,753,912 bytes) Requirements: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / Windows7 / XP64 / Vista64 / Windows76ဖိုးလမင်း
Facebook အကို အပြီးအပိုင်ဖျက်သိမ်းနည်း
အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်းပြုလုပ်ကြည့်ပါ။ အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားရတာအဆင်ပြေလုိ့ လွယ်ကူသလိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။…….
=> @ <=
Open your facebook account that you want to delete parmanetly .
Open another browser and copy and past below web link..
In this step you will see One Box that mention as below ,
If you do not think you will use Facebook again and would like your
account deleted, we can take care of this for you. Keep in mind that
you will not be able to reactivate your account or retrieve any of the content or information you have added.
If you would like your account deleted, then click “Submit.”
In this step you will see again one box that show,
You are about to permanently delete your account,Are you sure?
Fill up your password (To be comfirmed)
Type in the text box that Security Check Sample words as in the box.(Eg.CNS. Igbons)
You will see one box again finally,
(Your account has been deactivated from the site and will be permanently deleted within 14 days.
If you log into your account within the next 14 days, you will have the option to cancel your request.)
လူကြီးမင်းတို့ သိရှိထားသည့် Facebook သည် ခဏတာပိတ်ထားခြင်း ( Deactivate) လုပ်ထားခြင်းသည် အချိန်မရွေး
ပြန်လည် ၀င်ရောက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ကျနော်အခု ဖော်ပြပေးတဲ့ နည်းကတော့ Facebook အကောင့်တွေ အပြီးအပိုင်
ဖျက်သိမ်းနည်းပါ။ (Note ;ကျူကျူ များအတွက် အထူးအသုံးဝင်လိမ့်မည်ဟုထင်ပါတယ်)။
*အဆင်မပြေပါက ကျနော့်ထံသို့ feedback ပေးနိုင်ပါတယ်။*
Copyright မဟုတ်ပဲ ကျနော်ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ပြီး တစ်ဆင့်ချင်းရေးသားဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ကွန်ပြူတာ ကို Speed မြန်စေလိုလျှင် ။
With PC Boost your computer will run faster than ever before. Boost the performance of your PC the easy way
Download လုပ်ရန် >>>>> Click Here <<<<<<
အားလုံးပဲ ကွန်ပြူတာကို စိတ်အေးချမ်းသာစွာအသုံးပြုပြီး Q နိုင်ကြပါစေ။ အဲမှားလို့ဗျာ… စိတ်အေးချမ်းသာစွာ အသုံးပြုနိုင်ကြပါစေ။
PC System Care (ကွန်ပြူတာအတွက်သိရှိထားသင့်တယ်)
ကွန်ပျူတာ သုံးစွဲသူတိုင်း မိမိတို့ရဲ့ စက်ကောင်းမွန် မြန်ဆန်ရေးကို နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ လုပ်ဆောင် နေကြရပါတယ်။ ဒီလို လုပ်ဆောင်ရာမှာလဲ ဆော့ဝဲလ်ပေါင်းစုံ၊
နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ စမ်းသပ်လုပ်ဆောင် နေကြပါတယ်။ အဆင်ပြေပြီး ကောင်းမွန် လွယ်ကူတဲ့ Free Software လေးတစ်ခု ဖော်ပြချင်ပါတယ်။
Advanced System Care Software လေးက Window System ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ကောင်းမွန်လှပါတယ်။ ပိုက်ဆံ မကုန် အဆင်ပြေစေပါတယ်။
Window ကို ပြုပြင်မလား၊ System ရဲ့ ချို့ယွင်းချက်တွေကို လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အပြင် spyware removal, registry fix, privacy, disk defragment, security
analyzer စတာတွေကိုလည်း Scan လုပ်ပြီး ဖြေရှင်းပေးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Utilities မှာ Disk Cleaner, Disk Doctor, File Shredder, Game Booster, Internet Booster …. စသဖြင့် များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ Auto Shutdown,
Cloned Files Finder … များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ စက်တိုင်းမှာ မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
ဒီမှာ Download လုပ်ယူပါ။
Posted by ; မောင်စေတနာ
Window Myanmar Translator အဘိဓာန်
Window Myanmar Translator ကတော့ စာကြောင်းလိုက် စာပိုဒ်လိုက် တွေကို အင်္ဂလိပ်မှ မြန်မာလို တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန် ပေးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဝေါဟာရ တစ်ခုချင်းစီ ရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက် အဘိဓာန်ကိုပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။
၎င်း အဘိဓာန်မှာလည်း ထည့်သွင်းထားခြင်း မရှိသေးတဲ့ ဝေါဟာရတွေကို အသုံးပြုသူကိုယ်တိုင် ထပ်ထည့်ပေးထားလို့ရသလို
ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်တဲ့ ဝေါဟာရအဓိပ္ပါယ်တွေကိုလည်း ပြန်လည်ပြုပြင် မှတ်သားထားလို့ ရပါတယ်။ လက်တွေ့ကျကျလေးဖြစ်သွားအောင် သုံးကြည့်လိုက်ပါ။
Window Menu တွေကိုလည်း မြန်မာ စာလုံးတွေနဲ့ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ Software Requirements အနေနဲ့ .Net Framwork 2.0 လိုပါတယ်။ မြန်မာစာလုံးတွေ ကောင်းမွန်စွာ မြင်ရဖို့အတွက်လည်း Myanmar3 Font လိုပါတယ်။ အသုံးပြုပုံ အသေးစိတ် သိချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့
>>>>>>>> User Manual PDF <<<<<<< ပါပုံနှင့် တကွ သေချာရှင်းပေးထားပါတယ်။ ဒေါင်းပြီးဖတ်ကြည့်ပါ။
Software Download >>>>>>> မြန်မာဘာသာပြန် အဘိဓာန် နှင့် မြန်မာဖောင့်ဒေါင်းရန် <<<<<<<<<<<
ဒေါင်းလုပ်ပြုရန် ရာတွင် .net framework 2.0 တောင်းလာပါက >>>>>>> Download Here <<<<<<<<<
Posted by ; ဟင်းလင်းပြင်
မိတ်ဆွေများအတွက် လိုအပ်လျှင်အသုံးပြုလို့ရရှိစေရန် အတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Computer & Memory Stick တွေမှာပုံလေးတွေနောက်ခံထည့်လိုလျှင်။
Window7နှင့် Vista တို့တွင် အသုံးပြုလို့မရရှိနိုင်ပါ။
Software Download >>>>> Click Here <<<<<
ကျနော်ဖတ်ခဲ့ဖူးသည့် ဘလော့တစ်ခုမှာ တွေ့ လို့မျှဝေပေးထားတာပါ။
ဒေတာတွေကိုပြန်ရှာမရအောင်ဖျက်စီးတဲ့ Bot.exe virus
အခုတလော USB Device တွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတဲ့ ဗိုင်းရပ်တစ်မျိုးကတော့ Bot.exe လို့ခေါ်ပါတယ်။
မမ်မိုရီစတစ် ၊ အမ်ပီဖိုး ၊ အမ်ပီသရီးတွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရပါတယ်
Bot.exe ၀င်နေပြီဆိုရင် မမ်မိုရီစတစ်များ အမ်ပီဖိုး ပလေရာများတွင်မိမိဒေတာများ ပျောက်ဆုံးကုန်တာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ထိုဒေတာ ပျောက်ဆုံးသွားသော စက်များအားproperties ဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် မိမိထည့်သွင်းထားသော ဒေတာများ၏ Capacity အတိအကျရှိနေတာတွေ့ရပါမယ်။
နားလည်သူဆိုရင်တော့သိမှာပါ ဒါက Hidden ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုပေါ့…
Toll bar က Folder Options ကနေ ချိန်းကြည့်လဲမရပါဘူး Search နဲ့ရှာမယ်ဆိုရင်လဲ မရပါဘူး…
စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့Format မရိုက်လိုက်ပါနဲ့အုံး လွယ်လွယ်ပြန်ရမယ့် နည်းရှိပါတယ်။
… ဥပမာ- သင့်စက်ဟာ My Computer မှာ F: ဆိုပါတော့ဒေတာပျောက်နေသော F: ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင် Tool bar ပေါ်က Address bar မှာF:\_ ဆိုပြီးတွေ့ရမယ် သင့်စက်ထဲမှာ သင်မှတ်မိမယ့် သင့် ဒေတာဖိုင်နာမည်တစ်ခုကို Address bar မှာရိုက်ထည့်ပါ။
ဥပမာ- F:\_mp3 ဆိုပြီး ရိုက်ထည့်မယ် ပြီးရင် Enter key နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ mp3 ဆိုတဲ့ပျောက်နေတဲ့ ဖိုင်ထဲရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သင့်ဖိုင်များကိုသင်မှတ်မိသလောက်တော့ ပြန်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
စာလုံးအကြီးအသေးနဲ့ Spacebarအကွာအဝေးတော့မှန်ပါစေ။Notepad.exe ဗိုင်းရပ်မျိုး ၀င်နေတယ်ဆိုရင်လဲ ဒီနည်းအတိုင်း ဖိုင်တွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။Bot.exe ကို ဗိုင်းရပ်ဆော့ဖ်ဝဲတွေက မသိကြသေးပါဘူး ဒါကြောင့်ကာကွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့USB Disk Security လိုမျိုးဆော့ဖ်ဝဲတွေသွင်းထားသင့်ပါတယ်။
Virus များကို CMD ဖြင့်သတ်ခြင်း
ကွန်ပျူတာအသုံးပြုရာတွင် Anti Virus Software များအသုံးမပြု၍သော်လည်းကောင်း၊ အသုံးပြုထားသည့် Anti Virus Software များ ကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်ခြင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း Virus များပျံ့နှံ့ကူးစက်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ကြုံတွေ့ရပါက CMD မှတစ်ဆင့် Virus များ ကိုရှင်းလင်းနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ရှင်းလင်းရန်အတွက် Virus အမည်ကိုသိရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအနေဖြင့် သိရှိထားသင့်ပြီး အကျိုးရှိနိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းတစ်ဆင့်ခြင်းစီ ပြုလုပ်သွားရပါမည်။
၁။ Start \_ Run တွင် cmd ဟုရိုက်၍ OK ပေးရပါမည်။
၂။ ထို့နောက် ကွန်ပျူတာတွင်ရှိနေသည့် Partition များမှ Virus 0င်ရောက်နေသည့် အပိုင်းသို့ဝင်ရောက်ရပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာတွင် Partition ၃ ခုရှိသည့်အနက် D တွင် Virus ၀င်ရောက်နေပါက cmd တွင် D: ဟုရိုက်၍ Enter ကို နှိပ်ပေးရပါမည်။ ထိုအခါ cmd တွင် Virus ၀င်ရောက်နေသည့် Partition သို့ဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၃။ ထို့နောက် attrib -r -h -s(virus name.frile extension) ရိုက၍ Enter ပေးရပါမည်။ virus name.frile extension ဆိုသည်မှာ မိမိစက် တွင် ၀င်ရောက်နေသည့် Virus အမည်နှင့်အမျိုးအစားကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၄။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပေးပြီးပါက c:\_windows>- ဟုcmd တွင်တွေ့မြင်နေရမည်ဖြစ်ပြီး Virus ကိုရှင်းလင်းရန်အတွက် del(virus name.frile extension) ဟုရိုက်၍ Enter ပေးရပါမည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပြီးပါက ကွန်ပျူတာတွင်ဝင်ရောက်သော Virus ကိုရှင်းလင်းပြီးဖြစ်ပါသည်။
Posted by aa on နိုဝင်ဘာ 26, 2010 at 10:22am
ကျနော့်စက်မှာတော့ Virus မတွေ့ ရသေးလို့ မစမ်းကြည့်၇သေးဖူးခင်ဗျာ။မိမိစက်မှာ Virus များရှိလျှင် အသုံးပြုကြည့်ပါ။
ယခုတဖန် ထပ်မံပြီး နောက်ထပ် နည်းလမ်းတခုကတော့ ကွန်နရှင်အခက်ခဲကြောင့် မိမိ အီးမေးအကောင့်ကို ယာယီသော်လည်ကောင်း၊ ထာဝရသော်လည်းကောင်း ၀င်ေ၇ာက်အသုံးပြုလို့ မရရှိသောအခါမျိုးတွင် မိမိ တွင် အရေးပေါ်ကိစ္စတခုခုကြောင့် အီမေး ပို့ လို့ပါက……
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကွန်နရှင်ကြောင့်စိတ်ပျက်နေရသော သူငယ်ချင်းများအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Megaupload ကို free account နဲ့ premium accountကဲ့ သို့download ချနည်း
Galk မှာကိုယ့်ကိုဘယ်သူတွေ block လုပ်ထားသလဲ..စမ်းသပ်နည်း
Gtalk မှာ မိမိကိုတဖက်သူမှ Block လုပ်ထားပါသလားလို့ သိချင်လျှင်
Gtalk မှာ ကိုယ် မ chat ချင်တဲ့/မကျေနပ်တဲ့ သူကို block လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ကိုယ် block လုပ်ချင်တဲ့သူရဲ့ ID ပေါ်မှာ right-click လုပ်ပြီး block ကို ရွေးလိုက်ရုံပါပဲ။ ကိုယ့်ဘက်မှာ အဲဒီID ပျောက်သွားပြီး၊ သူ့ဘက်မှာတော့ ကိုယ်က offline ဖြစ်နေမှာပါ(သူများကိုသာ block လုပ်ချင်တာ…ကိုယ့်ကို block လုပ်တာကိုတော့ သိပ်ကျေနပ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား..။ ) အဲဒီတော့ ကိုယ့်ကို block လုပ်ထား/မထားကို စစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ပထမဆုံး ကိုယ်သိချင်တဲ့သူကို ရွေးပါ..ပြီး.. ‘Send voicemail’ button ကိုနှိပ်ပြီး call လုပ်လိုက်ပါ။ (သူ့ကို offline အနေနဲ့ပဲမြင်ရမှာမို့ အဲဒီအချိန်မှာ ‘Send voicemail’ button ပဲပေါ်နေမှာပါ။) မိန်းကလေးသံနဲ့ ‘The person you are trying to reach is unavailable. Please leaveamessage…’ ဆိုတဲ့ အသံမျိုး ကြားရရင်တော့ ကိုယ့်ကို block လုပ်မထားပါဘူး။ တကယ့်ကို offline ဖြစ်နေတာပါ။ အဲလိုမဟုတ်ပဲ ခေါ်လိုက်တာနဲ့ကျ ကျသွားတယ်၊ ဘာသံမှလည်းမကြားရဘူးဆိုရင်တော့… စိတ်မကောင်းပါဘူး…သင့်ကို block လုပ်ထားတာပါ… ကဲ…ကိုယ့်ကို ဘယ်သူတွေ block လုပ်ထားသလဲသိချင်ရင် စမ်းကြည့်လိုက်ပါလား…။ သိလာပါလိမ့်မယ်….။
Posted by sai bo bo on ဇွန် 21, 2011 at 3:12pm in ကွန်ပျူတာပိုင်းဆိုင်ရာ
ကွန်ပြူတာဖွင့်ဖွင့်ချင်း desktop တက်မလာလို့လား???
ကျွန်တော်စက် မှာ တစ်နေ့က စက်ကိုဖွင့်ဖွင့်ချင်း desktop က တက်မလာတော့ဘူးဗျာ့.. plain screen
ကြီးပဲ ပေါ်လာတယ်…ဘာဆိုဘာမှ လုပ်မရဘူး…toolbars တွေရော Start Program တွေရော ဘာမှ မမြင်ရတော့ဘူး.
အဲဒါနဲ့ test Manager ကိုခေါ်ပြီး Explorer.exe ကို New Test လုပ်ပြီး Run ကြည့်တယ် .ရသွားတယ်
ဒါပေမဲ့ စက်ကိုပြန်ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်တော့ အရင်အတိုင်းပဲ ပြန်ပြန်ဖြစ်နေတယ်..Virus ကြောင့်များလားဆိုပြီး စစ်တော့လဲ Virus မရှိဘူး…အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ Registry ကိုသွားပြီးမွှေရတော့တာပေါ့…အဒီတော့မှာပဲ အဆင်ပြေသွားတော့တယ်
ကျွန်တော့်လို ဖြစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများလဲ ကိုယ်တိုင်းလုပ်လို့ရအောင် ဆွေးနွေးလိုက်တယ်နော်…ဒီထက် ပိုကောင်းတဲ့ နည်းလေးများရှိခဲ့ရင်လဲ ဆေနွေးအကြံပေးကြပါနော်….ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ နည်းလေးကတော့…
Run Box ကိုဖွင့်လိုက်တယ်…Regedit ရိုက်ထည့်ပါ
Regiistry Editor ကျလာရင် HKEY_LOCAL_MACHIN ထဲက Software ထဲက microsoft ထဲမှာ Window NT
ထိရောက်အောင်သွာလိုက်ပါ… Window NT ထဲကမှာ CurrentVersion ထဲက Winlogon ထဲထိ အဆင့်ဆင့်ရောက် အောင်သွားလိုက်ပါ…..Winlogon ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင် ပေါ်လာတဲ့ ဘေးက Box ထဲမှာ Shell ဆိုတာလေး ရှာလိုက်ပါ…..အဲဒီ Shell ဆိုတာကို ကလစ်နှိပ်ပြီး Explorer.exe ပြောင်းပေးပါ…ပြီးရင် စက်ကို Restart ချကြည့်လိုက်ပါ..ကျွန်တော်တော့ အဆင်ပြေသွားတာပဲ….ကျွန်တော်လို့ဖြစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများလဲ လုပ်ကြည့်နော်…
Posted by kyaw soe on ဇွန် 21, 2011
မိတ်ဆွေများအခက်ခဲံများ ရှိလျှင် အသုံးပြုနိုင်ရန် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Web pages တွေ loading time မြန်လာအောင် လုပ်တဲ့နည်း
web page တွေloading time မြန်လာအောင် လုပ်တဲ့နည်းပါ။ တစ်ကယ်လည်းမြန်လာပါတယ်။
ISP က သာ မကောင်းနေရင်တော့ စိတ်လျှော့လိုက်ပေါ့။ သူတင်ကိုယ်တင် ပြိုင်ဆွဲရတာမျိုးဆို နှာတစ်ဖျားသာသွားတယ်။
ပထမဦးဆုံး start\_run\_regedit ရိုက် ပြီးရင် enter နှိပ်ပေါ့။
HKEY LOCAL MACHINE\_SYSTEM\_CurrentControlSet\_Services\_Tcpip\_ServiceProvider ကို အဆင့်ဆင့်သွားလိုက်ပါ။
အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ ငါးခုရဲ့ hexadecimal value ကို 1 လို့ ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် Restart လုပ်ပေးပါ။
post by netsay’s
Photoshop သင်ခန်းစာများကို E-Bookနဲ့ လေ့လာရန်။
Photoshop သင်ခန်းစာများကို E-Book အနေနဲ့ စုစည်းပေးလိုက်ပါပြီ
သင်ခန်းစာရေးသားကြသူများ – ဟန်သစ်ငြိမ်၊ သန်းနိုင်ဝင်း၊ မျိုးဟိန်းဇော်၊ ကျော်ဇင်ဦး၊ ညီမင်းစံ၊ အောင်ကျော်မိုး။
စုစည်းတင်ပြသူ – အောင်ကျော်မိုး။
ဤသင်ခန်းစာများကိုလေ့လာရာတွင် အခက်အခဲများရှိနိုင်ပါသည်။ အလုံးစုံပြည့်စုံမှုများမရှိနိုင်သည်ကို နားလည်ခွင့်လွတ်ပေးပါရန် ဦးစွာတင်ပြအပ်ပါသည်။ သင်ခန်းစာအများစုမှာ Photoshop အား အခြေခံအထိတတ်ထားလျှင် ပိုမိုသင့်တော်ပါသည်။ အခြေခံလုံးဝမရှိသူများနှင့် မသင့်လျော်ပါ။ လေ့လာသူအား တစ်စုံတစ်ခုသောအတိုင်းအတာထိ အကျိုးပြုနိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါသည်။ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
င်္င်္Free Download လုပ်ရန် >>> ကျုနေရာကိုနှိပ်ပါ <<<
3. Photoshop’s File Formats များအကြောင်း
4. အလင်းအမှောင်ကိုသုံး၍ထုများ ဖန်တီးခြင်း
5. ဖန်ပြားပုံသဏ္ဍာန်များ ဖန်တီးခြင်း
6. Layer Mask များအကြောင်း
8. အို… အရိပ်လေးရယ်
9. Layers in CS2
10. Fading the effect
11. The art of Pattern (Part 1)
12. The art of Pattern (Part 2)
13. The art of Pattern (Part 3)
14. Layer Mask Blending
15. တစ်စက္ကန့်ပဲလိုတယ် (သို့) Actions
16. Operation of Selections
17. Photoshop Brushes
18. ညအခါ လသာသာ
19. Grayscale and Monochrome
20. Hair Selection
21. Layer တွေကို အဖြေရှာကြမယ်
22. Sharpen the image
23. ပုံရိပ်တွင် Focus ဖန်တီးခြင်း
25. Perspective Crop
26. Logo ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်
27. Logo တစ်ခုကိုဖန်တီးခြင်း
28. Photo Repairing Guide (Part 1)
29. Photo Repairing Guide (Part 2)
30. Barcode maker
31. AutoCAD Drawing file များအား Photoshop သို့ ကူးပြောင်းခြင်း
32. AutoCAD Drawing file များအား Photoshop သို့ ကူးပြောင်းခြင်း ( Using Distiller Printer)
33. AutoCAD Landscape Library အတွက် Custom Context များဖန်တီးခြင်း
34. AutoCAD Elevation တစ်ခုအား အရောင်ဖြည့်သွင်းခြင်း
35. မင်္ဂလာခန်း (သို့) Custom Furniture များဖန်တီးခြင်း
36. Using image printer
38. Space Lighting Effects
39. Abstract Effects
40. Lighting Effects
41. Standup Effects
47. Nature 1 (ဘုရာစူး မိုးကြိုးပစ်)
48. Hazel Nut ပူပူလေး
49. Nature2(နှင်းဝေတဲ့ဆောင်း)
50. ပန်းချီကားတစ်ချပ်အား အသက်သွင်းခြင်း
51. Scan Line Pattern
56. နတ်သမီးလေးလို လှနေလို့
58. နူးညံ့ကျော့ရှင်း လှယမင်း
59. Mirror Effect 1
60. Mirror Effect 2
61. Mirror Effect3(ရေပေါ် အရိပ်ထင်)
62. Color Burn (လှပစွာ လောင်ကျွမ်းခြင်း)
63. သင်းပျံ့တဲ့ အမှတ်ရစရာတွေ
64. Auto-Align & Blend Layers (CS3)
65. SumoPaint: Online Image Editor
66. ပုံတူပွားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်၍
67. Overlay နှင့် အပျင်းပြေ
68. 3D Text
69. Metal Text
70. ရွှေအိုရောင်လို မှုန်းတဲ့စာသား
72. သတိ၊ ဓါတ်လိုက်တတ်သည်
73. အေးတိအေးစက် ရေခဲ Text
74. ဆယ့်ကိုးဇူလိုင် မမေ့နိုင်
75. More about GIF
76. Animation Method 1 (Frames from Layers)
77. Animation Method2(Tweening) Part 1
78. Animation Method2(Tweening) Part 2
79. Animation Method2(Tweening) Part 3
80. ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက် GIF Animation Text
81. ဖောင်း ၀ ကြီး Animation Text
82. Animation ads
83. Wipe Transition
84. Dissolve Transition
Posted by Aung Kyaw Moe on ဖေဖော်ဝါရီ 24, 2010 at 5:36pm။
ကိုအောင်ကျော်မိုးရဲ့ ဘလော့မှ ကူးယူ ပြီး ဖိုးလမင်းမှ Rar file နှင့် သင်ခန်းစာများကိုတပေါင်းတစည်းထဲပြုလုပ်ဖန်တီးပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။Rar or Zip file ကိုဖွင့်ယူရန်အတွက် အဲဒီ Download လုပ်ပြီးသား Rar file or Zip file အပေါ်မှာ Right Click နှိပ်ပါ။ထိုနောက် Extract File ကိုနှိ်ပ်ပါ။အဲ့ဒီနောက် box တခုပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့ Diplay / New folder ဆိုတာ ၂ ခုထပ်တွေ့ ပါတယ်။ Display အတိုင်းပဲထားရင်တော့ Download ထားတဲ့ Rar or zip file တည်ရှိတဲ့အထဲမှာပဲ ပေါ်မှာပါ. New Folder ကိုကလစ်လုပ်ပြီးရွေးရင်တော့ Floder တွေအများကြီးကျလာပြီး New Folder ဆိုတဲ့နာမည်နဲံ File တခုပေါ်လာမယ်။အဲဒီမှာ မိမိကြိုက်တဲ့ နာမည်ပေးပါ။ထို့နောက် OK ကိုကလစ်လုပ်ပါ။ ။အဲဒါဆို၇င် Rar or Zip File ကိုဖြေပြီးသွားလို့ သွားေ၇ာက်ဖွင့်ဖတ်လို့ရပါပီခင်ဗျာ။
မိတ်ဆွေများအတွက် လိုအပ်လျှင် အသုံပြုနိုင်ရန် ဝေဌပေးလိုက်တာပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဘာသာစကား၂၄ မျိုးမှမြန်မာသို့ ပြောင်းလဲပေးသော်Website
ဘာသာစကား ၂၄ မျိုးမှ မြန်မာသို့ တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုနိုင်သော
ဘာသာစကား ၂၄ မျိုးမှ မြန်မာဘာသာသို့ ပြောင်းလဲ ဘာသာပြန်ပေးနိုင်သော
ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု လွှတ်တင်ထားပြီးဖြစ်၍ မြန်မာဘာသာ ပြန်ဆိုမည့် သူများအတွက်
လွယ်ကူအဆင်ပြေစေကြောင်း ၆-၆-၂၀၁၁ ရက်က သိရသည်။ ယင်းဘာသာစကား ၂၄ မျိုးမှာ
အင်္ဂလိပ်၊ ဟီးဘရူး၊ ဂရိ၊ ပေါ်တူဂီ၊ အာရေဘစ်၊ စပိန်၊ နော်ဝေး၊ ဆွီဒင်၊ ဂျာမန်၊
ရုရှား ၊ ဂျပန်၊ တရုတ်၊ ကိုရီးယား၊ မလေးရှား၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း၊ ဟိန္ဒီ၊
ရိုမေးနီးယား၊ ပြင်သစ်၊ ဒပ်ခ်ျ၊ Finish ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ Polish နှင့် Danish
ဘာသာစကားများဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ဘာသာစကား၂၄ မျိုးကို မြန်မာဘာသာသို့
ပြန်ဆိုရန် http://www.myordbok.com/ သို့ ဝင်ရောက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ဝင်ပုံက လွယ်ပါတယ်။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲကို ဝင်လိုက်ပြီးရင် Search Box ထဲမှာ
ဘာသာပြန်ချင်တဲ့ စာပိုဒ်၊ စာကြောင်းကို Copy၊ Paste လုပ်လိုက်ရုံပဲ။
ပြီးရင် Enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း လိုသလို
ဘာသာပြန်ပေးပါတယ်” ဟု အဆိုပါ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို လတ်တလော သုံးစွဲနေသူတစ်ဦးက
ရှင်းပြသည်။ အဆိုပါ http://www.myordbok.com/သို့ ဝင်ရောက်လေ့လာကာ
ဘာသာပြန်လိုသူများအနေဖြင့် ဘာသာမပြန်မီ အဆိုပါဆိုက်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို
ကြိုတင်လေ့လာသင့်ကြောင်း သိရပြီး အဆိုပါ ဆိုက်မှာလည်း အင်တာနက်
သုံးစွဲသူများအကြား မေလ နောက်ဆုံးပတ်အတွင်းနှင့် ဇွန်လ ပထမပတ်အတွင်းမှာပင်
အသုံးပြုမှု များပြားလာကြောင်း ၂၀၁၁ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၆ရက်နေ့ထုတ် ပြည်မြန်မာ
Posted by sai on ဇွန် 14, 2011 at 10:05pm
မိတ်ဆွေများအားလုံး ဘာသာစကားအခက်ခဲများရှိလျှင် အသုံးပြု၇န်အတွက် ဝေဌပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Window7အကြောင်းသိကောင်းစရာများ။
Window7operation system ကို edition အမျိုးမျိုးနဲ့ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်လိုအပ်မဲ့အနေအထား ကိုယ်သုံးမဲ့ငွေပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုးရွေးချယ်နိုင်တာပေါ့။ Windows7edition အမျိုးမျိုးပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားတဲ့ Feature တွေ Function တွေ တွေ့ရမှာပါ။ Windows7အမျိုးအစား ၆မျိုးရှိပါတယ်။
– – Windows7Starter
– – Windows7Home Basic
– – Windows7Home Premium
– – Windows7Professional
– – Windows7Enterprise
– – Windows7Ultimate စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Windows XP မှာတုန်းကတော့ … XP
Prefessional & Home Edition နှစ်မျိုးကိုပဲ အများအားဖြင့်တွေ့ရပါတယ်။
သို့သော် XP မှာလဲ Starter version ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Media Center
Edition နဲ့ Tablet Edition တွေပါရှိပါတယ်။
– – Windows XP Starter
– – Windows XP Home Edition
– – Windows XP Professional Edition
– – Windows XP Media Center Edition
– – Windows XP Tablet Edition တွေဆိုပြီးရှိပါတယ်။
Windows7Starter ကို အသုံးပြုတာအရမ်းနည်းပါတယ်။ လက်လီအရောင်းတစ်ချို့နဲ့ ကွန်ပြူတာထုတ်လုပ်သူတစ်ချို့က ကွန်ပြူတာအသစ်ထဲမှာ တစ်ခါတည်းထည့်ပေးလိုက်တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီ version မှာ Aero user interface, DVD playback, Windows Media Center, Internet connection sharing တွေမရနိုင်ပါဘူး။
Domain system ကိုလဲ ဒီ version သုံးထားရင် join နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
Enterprise Feature တွေဖြစ်တဲ့ …
Encryption File System (EFS), AppLocker, DirectAccess, BitLocker, Remote
Desktop Host, BranchCache စတာတွေလဲမရနိုင်ပါဘူး။ နောက် … အသုံးဝင်တဲ့ IIS Web Server ကိုလဲ သုံးလို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
( Windows XP မှာလဲ IIS ပါပါတယ်။
များသောအားဖြင့်တော့ IIS သုံးချင်ရင် Windows Server versions တွေမှာပဲ
သုံးတာများပါတယ်။ Windows7မှာလဲ IIS ကိုတစ်ခါတည်းထည့်ပေးထားပါတယ်။ Web
Developer တွေအတွက်တော့ သိပ်အသုံးဝင်မှာပါ။ Windows7Professional,
Enterprise, Ultimate versions တွေမှာ IIS ပါဝင်ပါတယ်။ )
Windows7Starter edition မှာ Physical Processor (CPU) တစ်လုံးပဲ တပ်လို့ရပါတယ်။
core ကတော့ unlimited ပါပဲ။ eg. Windows 7
version အားလုံးက dual core, quad core … ဘာ ကိုး … ညာကိုး … အားလုံး
support လုပ်ပါတယ် …
Windows7Home Basic version တွေကို Emerging Market တွေလို့ဆိုတဲ့ ဖွံ.ဖြိုးစ နိုင်ငံတွေရဲ့ ဈေးကွက်မှာပဲတွေ့ရလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီ version မှာလဲ Aero user interface, DVD
playback, Windows Media Center, Internet connection sharing
Domain system ကိုလဲ Home Basic
version သုံးထားရင် join နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Enterprise Feature
တွေဖြစ်တဲ့ … Encryption File System (EFS), AppLocker, DirectAccess,
BitLocker, Remote Desktop Host, BranchCache စတာတွေလဲမရနိုင်ပါဘူး။ IIS
Web Server ကိုလဲ သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Windows7Home Basic edition မှာ
Physical Processor (CPU) တစ်လုံးပဲ တပ်လို့ရပါတယ်။ 32bit version မှာ
memory 4GB ထိ အများဆုံးသုံးနိုင်ပြီးတော့ … 64bit version မှာ memory 8GB
Windows7Starter ကို လက်လီအရောင်းတစ်ချို့နဲ့ ကွန်ပြူတာထုတ်လုပ်သူတစ်ချို့က ကွန်ပြူတာအသစ်ထဲမှာ တစ်ခါတည်း ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ (
မြန်မာနိုင်ငံမှာ computer ကို licensed windows နဲ့ရောင်းတဲ့အခါ Home
Premium version တွေနဲ့ပဲ ရောင်းတာများပါတယ်)။
Windows7Starter & Home Basics တွေနဲ့ မတူတဲ့အချက်က … Home Premium
edition မှာ .. Windows Aero UI, DVD playback, Windows Media Center,
Internet connection sharing, IIS Webserver တွေပါလာတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ Domain
ကိုတော့ Join နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Enterprise Feature တွေဖြစ်တဲ့
Desktop Host, BranchCache စတာတွေလဲမရနိုင်ပါဘူး။
32bit version Windows7Home Premium က Memory 4GB ထိ အများဆုံး support လုပ်ပါတယ်။
64bit version Windows7Home Premium က Memory 16GB ထိ အများဆုံး support လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Windows7Home Premium က Physical Processors 2လုံးထိ support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Windows7Professional version မှာ Home Premium version မှာရတဲ့ Feature တွေအကုန်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Domain system ကိုလဲ join နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ EFS (Encryption File System), Remote Desktop Host စတာတွေလဲ ရပါတယ်။ သို့သော် … Enterprise
Feature တွေဖြစ်တဲ့ AppLocker, DirectAssess, BitLocker, BranchCache
စတာတွေ တော့ မရနိုင်ပါဘူး။ Windows7Professional က Physical Processors 2လုံးထိ support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
တကယ်တမ်းမှာတော့ ယေဘုံယျအားဖြင့် … Windows7Enterprise Edition နဲ့ Ultimate Edition ဟာ
အတူတူပါပဲ။ Windows7Ultimate Edition ကိုလက်လီအရောင်းတစ်ချို့နဲ့
ကွန်ပြူတာထုတ်လုပ်သူတစ်ချို့က ကွန်ပြူတာအသစ်ထဲမှာ တစ်ခါတည်းထည့်ပေးလိုက်တဲ့
အခါမျိုးတွေမှာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Windows7Enterprise Edition ကိုတော့
Microsoft’s volume licensing customer တွေအတွက်ပဲထုတ်ပေးပါတယ်။ Windows 7
Enterprise & Ultimate Editions တွေမှာ တခြား Windows7Editions
တွေမှာရရှိနိုင်တဲ့ Feature တွေတင်မကပါဘူး … Enterprise Feature တွေဖြစ်တဲ့
… Encryption File System (EFS), AppLocker, DirectAccess, BitLocker,
Remote Desktop Host, BranchCache စတာတွေအပြင် Boot from VHD
ကိုပါရနိုင်ပါတယ်။ Windows7Enterprise & Ultimate Editions တွေဟာ Physical Processors 2လုံးထိ support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Note : MCTS ( Windows 7, 70-680 ) ဖြေမဲ့သူတွေအတွက် … 70-680 မှာ test လုပ်တဲ့
feature အများစုဟာ Enterprise & Ultimate Editions တွေက features
ဒီမှာ Windows7တင်ရင် အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်မဲ့ Hardware Requirements တွေကို ရေးသွားမှာပါ။ Operation
System (OS) တစ်ခုဟာ သူ့အတွက်အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်မဲ့ Hardware Requirements
တွေပြည့်မှီမှသာ ကောင်းကောင်း Operate လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုသတိထားရမှာက
…. အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ Hardware Requirement ဆိုတာဟာ Windows
အတွက် သီးသန့်လိုအပ်တာဖြစ်ပြီး သူ့ပေါ်မှာ Run မဲ့ Application
တစ်ခုချင်းစီဟာလဲ သူတို့ရဲ့ Memory နဲ့ Storage လိုအပ်ချက်တွေ
ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကိုယ်က စက်တစ်ခုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် (သို့မဟုတ်)
Windows Version တစ်ခုခုကို ကိုယ့်စက်ထဲ ထည့်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်အသုံးပြုမဲ့
Application တွေအတွက်ပါ Hardware Requirement ကို
Hardware Requirements for Windows7Starter & Home Basic Editions
Windows7Starter & Home Basic Editions တွေအတွက် အောက်ပါ Hardware Requirements တွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
– 1GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) Processor
– 512MB of System Memory
– 20GB (64-bit) or 16GB (32-bit) HDD
with at least 15 GB of free space (ဆိုလိုတာကတော့ … 64-bit version
ဆိုရင် 20GB HDD ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီ HDD မှာ အနည်းဆုံး 15GB free space
– 32MB of Graphics Memory with DirectX9 support
Hardware Requirements for Windows7Home Premium, Professional, Ultimate and Enterprise Editions
Professional, Ultimate and Enterprise Editions တွေအတွက် အောက်ပါ
Hardware Requirements တွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
– 1GB of System Memory
– 40GB of HDD with at least 15 GB of free space
– 128MB of Graphics Memory with DirectX9 support
Processor Architecture တွေမှာ 32-bit version ကို (x86) လို့ label တပ်ပြီး 64-bit version ကို (x64) လို့ label တပ်ပြီးဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ Windows7က Processor Architectures နှစ်မျိုးလုံးကို support လုပ်ပါတယ်။ Pentium
IV နဲ့ အစောပိုင်း Processor တွေဟာ x86 တွေများပါတယ်။ ပြီးတော့
အသစ်ထွက်တဲ့ Netbook သေးသေးလေးတွေရဲ့ Processor တွေရောပေါ့။ x64 Processor
သုံးတဲ့စက်မှာ x64 version Windows7& x64 version Applications
တွေတင်ပြီး Run နိုင်သလို၊ x86 versoin Windows7& x86 version
Applications တွေလဲ Run နိုင်ပါတယ်။
( အရင်ကတော့ x64 Processor သုံးတဲ့စက်မှာ x64 version OS &
Application တွေပဲ Run နိုင်တယ်လို့ကျနော်ထင်ခဲ့တာ။ OS နဲ့ Application
တွေရှားနိုင်လို့ x64 Processor သုံးထားတဲ့စက်တွေ
မသုံးသင့်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တာ။ ခုမှ မှားမှန်းသိတယ် … )
x86 Processor & OS
X86 version Windows7တွေဟာ Memory (RAM) အမြင့်ဆုံး 4GB ထိပဲ support လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Windows7x86 version ကို x64 Processor သုံးတဲ့စက်မှာတင်လို့ရပါတယ်။
သို့သော် OS ကတော့ Memory 4GB ထိပဲ အများဆုံးသိမှာဖြစ်ပါတယ်။
(အဲထက်ပိုနေလဲ သူမသိပါဘူး။ 4GB ထိပဲ support လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။)
x64 Processor & OS
x64 version Windows7ကိုတော့ x64 Processor သုံးထားတဲ့ စက်မှာပဲတင်လို့ရမှာပါ။
x64 version Windows7Professional, Enterprise, Ultimate Edition တွေမှာ
System Memory (RAM) 128GB (တစ်ရာနှစ်ဆယ့်ရှစ်) ထိ support လုပ်ပါတယ်။ x64
version Windows7Home Basic က 8GB ထိ support လုပ်ပါတယ်။ x64 version
Windows7Home Premium ကတော့ 16GB ထိ support လုပ်ပါတယ်။
Windows XP နဲ့အရှေ့က Windows တွေမှာတုန်းက C:,D:, တွေခွဲထားပြီးလို့ ကိုယ်ကလိုအပ်လို့ နောက်ထပ်ခွဲချင်သေးတယ် ဆိုရင် Norton Partition Magic လို Third Party Softwares တွေသုံးပြီး လုပ်ရပါတယ်။ Windows7မှာတော့ အဲဒီ Feature တစ်ခါတည်းပါဝင်လာပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Shrinkပါ။ My Computer –> Right Click –>à Manage ကိုနှိပ်ပါ။ Computer Management ပေါ်လာရင် Storage အောက်က Disk Management ကိုရွေးပေးပါ။ ပြီးရင် ကိုယ် Partition ခွဲချင်တဲ့ Volume ( C:, or , D: ) ကို Right Click နှိပ်ပြီး Shrink Volume ကို နှိပ်လိုက်ပြီး ဆက်လုပ်သွားရင် partition ခွဲလို့ရသွားပါပြီ။
Posted by Zay Yar Htun on နိုဝင်ဘာ 17, 2010 at 7:46pm
* မိတ်ဆွေများအတွက် Window7အကြောင်းသိကောင်းစရာလေးတွေကို ဝေဌပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ွGmail မှ အလွယ်ကူဆုံးပုံတင်ကြီးကြီးတင်နည်း။
Gmail ကနေပုံတွေကို attach file နဲ့မတွဲပဲ view ကျယ်ကျယ်နဲ့တစ်ခါတည်းပို့ရအောင်။ (မြန်မာနိုင်ငံမှ အင်တာနက်ကွန်နရှင်မကောင်းသူများအတွက် အလွန်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။) သူငယ်ချင်းတို့ gmail ကနေ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဓါတ်ပုံပို့ကြတဲ့အခါမှာ attach file နဲ့ တွဲပို့တဲ့အခါဆိုရင် view နဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစောင့်ရဦးမယ် Desktop ပေါ်မှာ တင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒေါင်းရဦးမယ် မလားဗျာ….အဲ့လို့ဒေါင်းဖို့ က မြန်မာနိုင်ငံက ကော်မျိုးဆိုရင်တော့ တေပီဆာပဲ …. အဲ့ဒီ အခက်အခဲတွေကိုကျော်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော် Gmail ကနေပုံတွေကို attach file နဲ့မတွဲပဲ view … Continue reading →
XP က သင်ဖျက်ပစ်ချင်မည့် အချို့သော system software များကို ဖွက်ထားတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်မြင်ရအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
– Advanced tab ရွေးချယ်ပါ။
– ‘Performance’ မှာ ’setting’ ဆိုတာ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီ setting ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ‘Adjust for best performance’ ကို ရွေးချယ်ပါ။
– Desktop မှာ New Floder ဖန်တီးပြီး ‘Application’ လို့ အမည်ပေးပါ။
– ပြီးရင် ပရိုဂရမ် တွေရဲ့ Shortcuts တွေ မှန်သမျှ ထည့်ပေးပါ။
– Taskbar မှာ Right Click နှိပ်ပြီး toolbar မှာ ‘New toolbar’ ကို သွားပါ။
– Desktop မှာ Right Click နှိ်ပ်ပါ။ New shotcut ကို ဖန်တီးပါ။
– နာမည်မှာ ’shutdown-s-to’ လို့ အမည်ပေးပါ။
– ပြီးရင် properties ကို သွားပါ။ Target နေရာမှာ “C:/Windows/system32/shutdown.exe”ကို ရွေးပေးပါ။ (XP.SP2 သမားတွေအတွက်တော့ အလွယ်တကူနဲ့ C > Windows > System32 > “shutdown icon” အထိ သွားပြီး shutcut ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။)
– Ctrl ကို ဖိထားရင်း keyboard အပေါ်တန်းက “+” ကို နှိပ်ပါ။ နှိပ်လေလေ font နဲ့ webpage စာမျက်နှာ ကြီးလာလေလေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အရွယ်အစား လျှော့ချဖို့ ကတော့ ‘Ctrl’ နဲ့ အနှုတ်လက္ခဏာကို တွဲဖက်အသုံးပြုပါ။
– ပြီးရင် Advanced ကို click နှိပ်ပါ။အဲဒီထဲကမှ ‘Error Reporting’ Disable ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး OK နဲ့ ထွက်ပါ။
– ဖွင့်ချင်တဲ့ ဖိုင်တစ်ခုက်ို ‘Right Click’ ထောက်ပြီး ‘open with’ ကို ရွေးချယ်ပါ။
– ‘Browser’ လုပ်လိုက်ရင် ပရိုဂရမ်တွေ အစီအရီ ပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ကြိုက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး ဖွင့်လှစ် နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမျှ ဖွင့်ကြည့်လို့ မရဘူးထင်တဲ့ Note pad ပုံစံ ပရိုဂရမ်တွေကို word pad နဲ့ ဖွင့်လို့ ရပါတယ်။
– Floder ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
– ပြီးရင် Menu bar ထဲက ‘View’ မှာ Filmstrip ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။
– Ctrl Key ကို ကိုင်ထားပြီး လိုအပ်သလို အကွက်ရွှေ့ လို့ ရပါတယ်။
– IE ကို ဖွင့်ပါ။
– Tools ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ General အောက်မှာ ရှိတဲ့ address box မှာ user blank ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
– Apply ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ OK ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
– www. google.com ကို သွားဖို့ အတွက် အရှည်ကြီး ရိုက်နေဖို့ မလိုပါဘူး။
– google ကို ရိုက်ပါ။ ပြီးရင် Ctrl key ကုိင်ထားပြီး Enter ခေါက်ပါ။ အဲဒီလို shot-cuts တွေကို လေ့လာရင်း သုံးစွဲရင် ပိုမြန်ဆန် စေပါတယ်။
– Search window ကို ဖွင့်ပါ။
– Change preferences ကို click လုပ်ပါ။
– ‘Without an animated screen character’ ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
– Animated object မရှိတော့တဲ့ အတွက် Search box ဟာ ပိုပြီး မြန်ဆန် လာပါလိမ့်မယ်။
– Control panel > Taslbar and Start Menu ကို ရွေးချယ်ပါ။
– Start Menu ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
– Customize ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
– Advanced tab ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
– My Music ကို ရွေးချယ်ပါ။
– လိုချင်တဲ့ image ဒါမှမဟုတ် webpage ကို ဖွင့်ပါ။
– Keyboard က ‘print screen preview’ ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ (ဖွင့်ထားတဲ့ ပုံရိပ် အနည်းငယ်သာ လိုချင်ရင် Alt နဲ့ တွဲနှိပ်ပါ။)
– ပြီးရင် Start > Run box မှာ ‘mspaint’ဆိုပြီး စာရိုက်ပါ။ (ရိုးရိုး paint program ကို ခေါ်သုံးရင်လည်း ရပါတယ်။)
– paint ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ ‘Ctrl+V’ ဒါမှမဟုတ် ‘File menu’ အောက်က ‘paste’ ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ (ဤ paint နေရာမှာ အခြား Clipboard ရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံ တည်းဖြတ် ဆော့ဖ်ဝဲ တွေ photoshop corel draw စတာတွေ သုံးစွဲ နိုင်ပါတယ်။)
– Control Panel > display
– Display properies box ကျလာရင် ’screen saver tab’ ကို ရွေးချယ်ပါ။
– နောက်ဆိုရင် Screen Saver ဟာ ရုပ်ရှင်တွေ ပြသလိုမျိုး ပုံရိပ်တွေ တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး မရိုးနိူင်အောင် ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
– (My Picture folder ထဲမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Image တွေကို အရင်ဆုံးထည့်ထားရပါမယ်။ Slide Show မှာ ပုံရိပ်တစ်ခု နဲ့ တစ်ခုအကြား ကြာမြင့်ချိန်က်ို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်။)
– firefox မှာ Menubar ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပါ။
– အဲဒီထဲက ပေါ်လာတဲ့ customize bar ထဲကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ‘icon’ တွေကို ပေါင်းထည့် ပေးပါ။
– View > toolbar > customize
– အဲဒီအထဲကမှ စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပြင်ဆင် ထားတဲ့အတွက် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အချိန်မှာ လိုသလို အသုံးချနိုင်တဲ့ icon တွေ အဆင်သင့် မြန်မြန် ဆန်ဆန် ရှိနေမှာပါ။
– IE ကိုဖွင့်ပါ။ Tools Menu မှာ ရှိတဲံ့ internet options ကနေ Clear History ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ ‘Cache’ ကိုရှင်းပါ။ ပိုပြီး အန္တရာယ် ကင်းစေချင်ရင် ‘Cookies’ တွေကို ရှင်းပါ။
– Privacy ကို ကလစ်နှိပ်တဲ့အခါမှာ box ရဲ့ အောက်ဆုံးမှာ “private data” တွေ့ရပါမယ်။ “Setting” ကို ၀င်ပြီး အမှန်ခြစ်တွေ ပေးထားပါ။ OK နှိပ်ပြီး ပြန်ထွက်ပါ။ “Always Clear my private data when I close firefox” ရှေ့ မှာ အမှန်ခြစ်ပေးပါ။ Cyber cafe မှာ သုံးစွဲဖို့ သင့်တော်စေတဲ့ tool တစ်ခုပါ။
– Regedit လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
– HKEY_LOCAL_MACHINE ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
– Software ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
– Microsoft ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
– Windows ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
– Current Version ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
– Uninstall ဆိုပြီးပေါ်လာပါမယ်။အဲဒီထဲမှာ ကိုယ် uninstall လုပ်ခဲ့စဉ်တုန်းက အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် မပျက်ခဲ့တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ အကြွင်းအကျန်နဲ့ အစအန တွေကို ရှင်းလင်း ထုတ်ပါ။
– Restart ပြန်လုပ်ပါ။
– Hardware ကို ရွေးချယ်ပါ။
– Device Manager ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
– ‘Mice and other pointing serices ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ mouse ကို right click နှိပ်ပြီး properties ကို စိတ်ကြိုက် ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်။
– Start > All Programs > Accessories > System tools > Disk Clean up > More Options အထိ ဆက်တိုက် သွားပါ။
– အဲဒီ More Options မှာရှိတဲ့ restore point အဟောင်းတွေကို delete လုပ်ပစ်ပေးပါ။
– Start > All Programs > Accessories > System tools >Disk Defragmenter ကို ရွေးချယ်ပါ။
– Analyzing လုပ်တာနဲ့ Defragment လုပ်တာ နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ နာရီဝက်၊ တစ်နာရီလောက် အချိန် ပေးရပါမယ်။ ဒီ tool ဟာ window နဲ့ ‘built-in’ tool ဖြစ်ပြီး System မှာရှိတဲ့ မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေနဲ့ အမှိုက် အစအန တွေကို အထိုက်အလျှောက် ဖယ်ရှား ပေးတဲ့အတွက် သုံးစွဲ သင့်ပါတယ်။
– My Computer ကို Right Click နှိပ်ပြီး properties ကို ရွေးချယ်ပါ။
– ကျလာတဲ့ box ထဲမှာ Advanced ကို ထပ်မံ ရွေပေးပါ။
– ‘Performance’ မှာရှိတဲ့ ‘Settings’ ကိုရွေးချယ်ပါ။
– Change icon ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
– ပြီးရင် “customize” box ကို ‘on’ ပြီးတဲ့ အခါမှာ C.D.E ရှိတဲ့ drive တစ်ခုချင်း စီကို လိုသလောက် virtual memory ထပ်မံ တိုးဖြည့်ပေးထားလို့ ရပါတယ်။ ပြီးရင် set command ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး OK နဲ့ ထွက်ပါ။
– Kkeyboard က windows Logo Key လေးကို ဖိထားပါ။ ‘L’ ကို နှိပ်ပါ။
– Shutdown icon ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်သလို လိုအပ်သလို ပြန်လည် ၀င်ရောက်နိုင်တဲ့ Log-on buttom ကလေးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Posted by Aung Wai Yan Phyo on မေ 1, 2011 at 11:00pm
သတင်းပို့မယ် View Aung Wai Yan Phyo’s blog
မိတ်ဆွေများအတွက် အကျိူးရှိလိမ့်မည်ထင်သောကြောင့် ကျနော်ဝေဌပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Living Together ကိစ္စ နှင့် ဘ၀နိဂုံးချုပ်ခြင်းများ။
Living Together ကိစ္စ နှင့် ဘ၀နိဂုံးချုပ်ခြင်းများ။ ကောင်မလေးတစ်ယောက် (မ—-) စင်္ကာပူမှာ ကျောင်းပီးလို့ အလုပ်ရှာနေတုန်းပါ.. ကောင်မလေးက သူ့ အမေနဲ့အတူနေပါတယ်…. အရွယ်ကလေးကလဲရလာပီဆိုတော့ ရည်းစားလေးထားကြည့်တာပေါ့…. တနေ့ ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို သူနဲ့အတူနေဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်…(ကောင်လေးကလဲ မြန်မာနိုင်ငံကပါပဲ..) ဟိုမှာ တွေ့ ရင်းကြိုက်သွားကြတာပေါ့…. ကောင်လေးကအဲ့လိုနေဖို့ တောင်းဆိုတော့ ကောင်မလေးကလဲ ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူးဆိုပီးတော့ လက်ခံလိုက်ပါတယ်… ပီးတော့ ကောင်လေးက ကောင်မလေးနဲ့အတူ နေစဉ်ဖြစ်ရပက်များ အားလုံး(အစအဆုံးကို) video camera နဲ့ မှတ်တမ်းတင်ပီး အင်တာနက်ပေါ်ကို … Continue reading →
၀င်းဒိုးXPမြင်ကွင်းကို ၀င်းဒိုး7 မြင်ကွင်းပြောင်းလဲသောဆောစ့်ဝဲလ်(၀င်းဒိုး Xp အတွက်သာ)
သူငယ်ချင်းတို့ကို မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်လေးကတော့..
၀င်းဒိုးXpကို ၀င်းဒိုး7မြင်ကွင်းပြောင်းတဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ
သူငယ်ချင်းတို့ နှစ်သက်မယ်ထင်ပါတယ် (၀င်းဒိုးXpသုံးတဲ့သူတွေ)
ပထမအသုံးပြုရမှာက Theme ကိုပထမအသုံးပြုပါ
ဒုတိယအသုံးပြုရမှာက ကွန်ပျူတာဘားတန်းကို အကြည်ဖောက်အောင်လုပ်တဲ့
TransBar ပရိုဂရမ်လေးကို Run လိုက်ပါ။
windows starup ကိုအမှတ်ပေးထားရင် နောက်တစ်ခါပြန်ဖွင့်တဲ့အခါ
ViGlance OneStep V2 ဆိုတဲ့ပရိုဂရမ်ကို Run လိုက်ပါ….
.နောက်ဆုံးအသုံးပြုရမှာက Start Menu ကို ၀င်းဒိုး7ပုံစံ အတိုင်းဖြစ်အောင် ViStart
ပရိုဂရမ်လေးကို Run လိုက်ပါ
အပေါ်ကပုံမှာပြတဲ့အတိုင်း Option ထဲဝင်ပြီးတော့
ဒါဆိုသူငယ်ချင်းတို့ကွန်ပျူတာမှာ……ကျွန်တော်စက်မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ အတိုင်းဝင်းဒိုး7
http://www.mediafire.com (သို့) http://tunabox.net/ (သို့)http://www.4shared.com/
free ဗားရှင်းဖြစ်တဲ့အတွက် သူငယ်ချင်းတို့စိတ်သိပ်ရှုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူး
Posted by အမျိုးကောင်းသား on မေ 17, 2011 at 8:16pm
သတင်းပို့မယ် View အမျိုးကောင်းသား’s blog
သူငယ်ချင်းများနှင့် မိတ်ဆွေများအတွက် ကျနော့် ဖတ်ရသမျှလေးကို ဝေဌပေးထားတာပါခင်ဗျာ။
မိမိအသုံးပြုနေသောအီးမေးဖွင့်မရပဲ ,Email ပို့ ချင်သူများအတွက်
မိမိအသုံးပြုနေသောအီးမေးဖွင့်မရပဲ Email ပို့ ချင်သူများအတွက် ယနေ့ ခေတ် ၂၁ ရာစုမှာ IT နည်းပညာများတိုးတက်လာတာနှင့်အညီ လူတိုင်းလိုလို အီးမေးများကို အသုံးနေကြပါတယ်။အသုံးမပြုတတ်သူများတို့ ကလည်း ခေတ်နောက်ကျမခံရအောင်အားကြိုးမာန်တက်လေ့လာနေကြ။ အချို့ဆိုလျှင် အင်တာနက်အသုံးပြုတတ်ရန်။ အီးမေးများပို့တတ်ရန် ပိုက်ဆံကြေးကြီးပေးပီးမြန်မာပြည်မှာတတ်နေကြရပါတယ်။ အဲဒီလို အားကြိုးမာန်တက် သင်တန်းတွေတက်ပြီး အီးမေးလည်းကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်သွားတဲ့အခါမှာ အင်တာနက်ကွန်နရှင်လေးနေတာကြောင့် (Internet Connection Receiving Signal Dealay) Email Web Sites တွေဖွင့်မရတဲ့အခါမျိုးကြုံရတဲ့အခါမျိုးရှိပါလိ့မ်မယ်။ မိမိကလည်းအီမေးကို သူငယ်ချင်၊မိတ်ဆွေ၊ မိသားစုဝင်များထံသို့ အီးမေးပို့ ချင်သော်လည်း အထက်ပါကဲ့သို့ … Continue reading →
Gtalk ကိုအမြဲတမ်း Idle မီးဝါနေအောင်လုပ်နည်း။
* Gtalk ကိုအမြဲတမ်း Idle မီးဝါနေအောင်လုပ်နည်း။ *
ယနေ့ခေတ်မှာ Gtalk သုံးသူများအဆင်ပြေစေရန်အတွက် Gtalk Idle software လေးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူငယ်လူကြီး ။ကျား/မ မရွေး ယနေ့ခေတ် အင်တာနက်သုံးစွဲသူအများစုတွေက မိမိတို့ရဲ့
အားလပ်တဲ့အချိန်လေးမှာ အွန်လိုင်းမှာ သူငယ်ချင်းများနဲ့ စကားပြောကြ။ chatting တက်ကြပါတယ်။ လူတကိုယ်စိတ်
တမျိုးနဲ့သုံးကြ၇ာ အချို့က မိမိတို့ ၀ါသနာအရ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင် ကို အွန်လိုင်း chatting များမှ အီစီကလီလိုက်ကြတယ်။တချို့ က
ဘာသာရေးနဲ့ တ၇ားဓမ္မတွေကို အဝေးေ၇ာက်သူငယ်ချင်းများနဲ့ ဆွေးနွေးကြတယ်။တချို့က ၇ပ်ဝေးမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းများ၊ မိတ်ဆွေများ၊
မိသားစုများကို ဆက်သွယ်၇န်အသုံးပြုကြပါတယ်။အဲဒီလို အသုံးပြုကြတဲ့အခါမှာ မိမိ တဖက်မှာ အလုပ်များနေတဲ့အချိန်ဆိုအွန်လိုင်းသူငယ်ချင်းများ
က မိမိကို ဖုန်းခေါ်ခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ချက်တင်ဖြင့် သော်လည်းကောင်း လာရောက်နှုတ်ဆက်ကြလျှင် မိမိ မအားလပ်သောအချိန်တွင်
စိတ်ကသိ ကအောက်ဖြစ်နိုင်မှာ မုချမလွဲပါ သို့ မဟုတ် ယနေ့ခေတ်လူငယ်များ ကလည်း QQ များဝါသနာပါသူများကလည်း တဖက်လူကို အီစီကလိရိုက်ချင်
သောကြောင့် မိမိ တဖက်တွင် တပါးသူနှင့် ချက်တင်တက်နေတုန်းမှာ Second person ဒုတိယလူနဲ့မချက်ခြင်ကြတဲ့အခါများရှိပါလ်ိမ့်မယ်။အဲဒီအခါ
မိမိ အာရုံစိုက် QQ နေသာ၊ အီစီကလီရိုက်နေသော ..အဲ sorrry စကားနောက် စာသားလိုက်သွားလို့ ..ဟဲဟဲ… သူတဦးတယောက်တည်းနှင့်သာ
ဆက်သွယ်နေသောအခါတွင် ယခု ကျနော်ဖော်ပြသည့် Google Idle mood ကို အသုံးပြု၇်ျ Gtalk မှ မီးအစိမ်း နှင့် အနီ အခြေအနေမှ မီးဝါသောအခြေအနေ ( Idle ခေါ်ကွန်ပြူတာနားတွင် လူမရှိသောအနေအထား) ဖြင့် Gtalk ကို အေးအေးဆေးဆေး QQ နိုင် ….အဲမှားပြန်ပီ.။ အေးအေးဆေးဆေး တဦးတယောက်တည်းနှင့်သာ ချက်တင်တက်နိုင် သို့မဟုတ် မိမိအလုပ်ကို အေးဆေးစွာလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ Gtalk Idle Software ကို Download လုပ်ပါ.။ Download >>> CLICK HERE<<<
ဒုတိယအဆင့်မှာတေ့ာ မိမိကွန်ပြုတာ၇ဲ့ အောက်ခြေ Task Bar မှာ Gtal Icon ပုံလေးမှာ Right Click (mouse ရဲ့ ညာဖက်ကခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ)။အဲဒီနောက်
ဆိုပြီး ၃ မျိုးတွေ့ ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ ၃ မျိုးထဲမှာ Alway Idle ကို အမှတ်ကလေးဖြစ်သွားအောင် Click လုပ်ပီးေ၇ွးလိုက်တာနဲ့ မိမိရဲ့Gtalk မှာ မီးဝါသွားတာ တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ မ၀ါခဲ့ရင် Never Idle ကို ပြန် Click လုပ်ပီး နောက်ထပ်တကြိမ်မှာ Double Click နဲ့ Alway Idle ကိုပြန်ရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
Gtalk ရှိမှငါတို့ဘ၀ကသာယာတယ်ဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေ QQ များအတွက် လိုအပ်ချက်လေးကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ haha
* Website Speed တွေမြန်ဆန်လာအောင်လုပ်နည်း *
အရင်ဆုံး hotspot Shield ကို အရင် Download လုပ်လိုက်ပါ။ http://ifile.it/1n9aquc Download ပြီးရင် run လိုက်ပါ။ toolbar တွေ
မလိုချင်ရင် unclick လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ Run ပြီးရင် စပြီး သုံးလို့ရပါ ပြီ။ hotsport Shield icon လေးကို Click ပြီး Connect/on ကို Click ပါ။
IE တက်လာရင် ခဏစောင့်ပါ။ ၄င်း Icon အနီရောင်လေး၊ အစိမ်းရောင် ပြောင်းသွား ရင်၊ IE မှာ Connect ON ပေါ်နေရင် ပိတ်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် Firefox မှာရော IE မှာပါ နှေးကွေးတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကို မြန်မြန်ဖွင့်လို့ ရပါပြီ။ Firefox မှာ Block ထားတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် ကို
ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် Start ဆိုတာ ပေါ်လာမယ်။ Click ပါ။ ပြီးရင်ပိတ်လိုက် (သို့မဟုတ်) Home ကို ပြန်သွား။ စောစောက Website ကို
Download လုပ် >>> ကျုနေရာကိုနှိပ်ပါ <<<
Posted by aung aung on မေ 14, 2011 at 8:43pm
သတင်းပို့မယ် View aung aung’s blog
မိတ်ဆွေများအတွက် အကျိုးရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပြီး ဝေဌပေးလိုက်ပါတယ်။အဆင်ပြေကြပါစေ။
ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာလေးကို ကျွန်တော် တင်ပြပေးပါအုံးမယ်။ သူ့စက်မှာ Firefox Browser က ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ Error ဘဲပြနေတယ်။ ဘာဆိုဒ်မှ ဖွင့်လို့မရဘူး။ နောက်ပြီ Firefox ကိုဖြုတ်ပြီး ပြန် Run လိုက်တဲ့ အခါမှာလည် အဆင်မပြေဘူး။ ဒါပေမဲ့ Internet Explorer ကတော့ ဖွင့်လို့ရတယ်။ ဒါနဲ့ ဘာပြဿနာလည်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် Add-On တွေ ပြန်စစ်တယ်။ တစ်ခုချင်ဆီ ပြန်စစ်တော့လည် အဆင်မပြေဘူး။ Firefox က Network မှာ ၀င်စစ်လိုက်တော့မှ သွားတွေ့တော့တယ်။ Proxy Code တွေ ခံထားတာ သွားတွေ့ရတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ထားလဲတော့ မသိဘူး။ Firefox ကို Uninstalled လုပ်ပြီး ပြန်တင်တာတောင် ဒီ Proxy က ပြုတ်မသွားဘူး။ Code တွေကို စစ်ဆေးကြည့်တော့လည် အမေရိကန် Proxy တွေဖြစ်နေတယ်။ စဉ်းတော့ စဉ်းစားစရာဖြစ်နေတယ်။ သူက HTTP Proxy,FTP Proxy,Gopher Proxy ဆိုဒ်တွေကို ပိတ်ထားတော့ ဘယ်ဖွင့်လို့ရမလဲ။ ကျွန်တော် တက်သလောက် မှတ်သလောက်နဲ့ ကြိုစားကြည့်ပေမဲ့ အဖြေက ကောင်တာ လိုက်လို့ မရဘူး။ ကျွန်တော်အထင် Firefox Add-On တစ်ခုခုက ပါလာတာဖြစ်နိုင်သလို Software တွေက ပါလာတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ထားတော့ အခုလို ဖွင့်မရ တဲ့ ပြဿနာကို အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ အဆင်ပြေသွားပါမည်။ အောက်က ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါ။ Proxy Code တွေ ထည့်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဖွင့်လို့အဆင်မပြေဖြစ်နေတာပါ.။ No Proxy ပေးလိုက်ရင်တော့ အားလုံး ပြန်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
1.Firefox >> Tools >> Options ကို click လိုက်ပါ.။
2.Options ကို click ပြီရင် အောက်ပါအတိုင်းကျလာပါမည်။ Advanced >> Network >> Setting ကို click လိုက်ပါ။
3.ကျလာတဲ့ BOX မှာ No Proxy ကို အမှန်ခြစ်ပေးပြီး OK ပေးပြီ Apply ကို နိုပ်လိုက်ပါ။ အားလုံး ပြန်ဖွင့်လို့ရသွားပါမည်.။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by မိုးထက်မြင့် at 4:10 AM
မြန်မာပြည်မှ သူငယ်ချင်းမှာ အင်တာနက်သုံးရာမှာ Firefox အသုံးပြုသူများအတွက်Errorအခက်အခဲဖြစ်နေသူများအတွက် ကျနော်ဖတ်ဖူးတာလေး Share လိုက်တာပါ။
ွGmail မှအီးမေးပို့ သူရဲ့ Locationကြည့်နည်း။
Gmail မှအီးမေးပို့ သူရဲ့ Locationကြည့်နည်း။
1)ပထမဦးဆုံး Gmail ကိုသွားပြီး Sign In ၀င်ပါ။
2) ပြီးရင် Inbox ၊ Spam ကိုသွားပြီး ကိုယ့်ကိုပို့ထားတဲ့ Mail ကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျား။
3) ပြီးရင် အဲ့ဒီ Mail ရဲ့ညာဘက်ထောင့်အပေါ်ဆုံးမှာ Reply နဲ့ Download Arrow
ရှိပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲ့ဒီ Down Arrow ကိုနှိပ်ပြီး Show Original ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
4) ပြီးလို့ရှိရင် နှောက်ထက် Pop Up Window တခုတက်လာပါ့မယ်ခင်ဗျား။
တက်လာရင် အဲ့ဒီမှာ Received: From ******************* ([**************)]
ဆိုတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျား။ အဲ့ဒီ ဂွင်းစ ၊ ဂွင်းပိတ်ထဲကဟာက ကိုယ့်ကိုပို့လိုက်တဲ့
Mail ပိုင်ရှင်ရဲ့ Computer IP Address ပါခင်ဗျား။ အဲ့ဒီ Text File ထဲမှာ
ပို့လိုက်တဲ့ Mail ပိုင်ရှင်ရဲ့ Computer Information တွေပါဘာတယ်ခင်ဗျား။
5) ပြီးရင် အဲ့ဒီ IP Address ကိုကူးပြီး ဒီမှာ (သို့ မဟုတ်) ဒီမှာ သွားကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျား။
*အမျိုးသားများ နှင့် ကိုလာ အချိုရည်*
ကိုလာအချိုရည် အမြောက်အမြား သောက်ခြင်းက အမျိုးသားများ၏ သုက်ပိုးအရေအတွက်ကို လျော့နည်းကျဆင်းစေသည်ဟု ယူဆရကြောင်း သုတေသီများက ပြောကြားလိုက်သည်။ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှ ပညာရှင်များက နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကိုလာတစ်လီတာစီ စွဲမြဲစွာ သောက်သုံးပါက သာမန်ထက် သုက်ပိုးအရေအတွက် ပျမ်းမျှအားဖြင့် (၃၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့ကျသွားတတ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သုက်ပိုးအရေအတွက် နည်းပါးသော အမျိုးသားတစ်ဦးသည် သာမန်အားဖြင့် သားသမီးရနိုင်ခြေ နည်းပါးလေ့ရှိသည်။ ယင်းသည် ကိုလာတွင် ပါဝင်သော ကဖင်းဓာတ်နှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ကဖင်းဓာတ်ပါဝင်သည့် ကော်ဖီကို သောက်ခြင်းကြောင့်မူ အဆိုပါ ဆိုးကျိုးမျိုး ကြုံတွေ့ရလေ့မရှိကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကိုလာအချိုရည်များရှိ ကဖင်းသည် ကော်ဖီတွင်ပါသော ကဖင်းထက် အာနိသင်ပြင်းထန်ကာ ပမာဏ ပိုမိုများပြားနေသောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ သုတေသန ရလဒ်သစ်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည့် ဦးဆောင်သုတေသီ ကိုးလ်ဂျန်ဆန်က ကဖင်းဓာတ်သည် အမျိုးသားတစ်ဦး၏ မျိုးပွားကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုများအတွက် လေ့လာမှုများ ပိုမိုပြုလုပ်သွားရန် လိုသေးကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုလေ့လာမှု စစ်တမ်းကို လူပေါင်း(၂၅၀၀)ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ကိုလာပုံမှန် မသောက်သူများသည် သောက်သူများထက် သုက်ပိုးပါဝင်မှု အရည်အသွေး ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး သုက်ရည်တစ်မီလီလီတာတွင် သုက်ပိုးကောင်ရေ ပျမ်းမျှသန်း(၅၀)ခန့် ရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒိန်းမတ်ရှိ လူငယ်များကြား ကိုလာသောက်သုံးမှု အလေ့အထသည် ပြီးခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း မြင့်တက်လာပြီးနောက် သုတေသီများက ကိုလာနှင့် ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြား ဆက်စပ်မှုကို လေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပညာရှင်များက နေ့စဉ်အနည်းဆုံး ကိုလာတစ်လီတာ သောက်သုံးသူ အမျိုးသား (၉၃)ဦးတွင် သုက်ပိုးပမာဏမှာ တစ်မီလီလီတာတွင် (၃၅)သန်းမျှသာ ရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ယင်းတို့သည် Fast Foodများ ပိုစားကြသလို အသီးအရွက် စားသုံးမှုလည်း လျော့နည်းနေသည့်အချက်ကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားသင့်ကြောင်း ပညာရှင်များက ၀န်ခံခဲ့သည်။ ယခုလေ့လာတွေ့ရှိမှု အတိအကျ ရလဒ်များကို အမေရိကန်ထုတ် Epidemiology ဆေးပညာဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
အမျိုးသားများ သိထားသင့်ရန်အတွက် ဝေဌပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မိမိသိရှိလိုသော သူ နေထိုင်သည့်နိုင်ငံကြည့်နည်း
***** IP Address Finder and Location with Information****** မိမိသိလို သူငယ်ချင်းများနေထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့် ဘယ်နေရာမှ ဘယ်အင်တာနက်လိုင်းကိုအသုံးပြုနေပါသလဲဆိုတာကို အထက်ပါ အကွက်လေးထဲမှာ မိမိသိရှိထားသော IP Address (Internet Protocol address ) ကိုအဲဒီအထဲမှာ Pasteလုပ်ပြီးရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ရှာဖွေရန်ပုံစံကိုအထက်မှာပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Click here ကျုနေရာကိုနှိပ်ပီးသွားရောက်ရှာဖွေပါ။ ထို့နောက် Find Location ကို Click နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အောက်ပါအတိုင်း မိမိသိရှိလိုသော သတင်းအချက်လက်ကိုတွေ့ ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ IP Address … Continue reading →
Youtube to Mp3 Converter အသုံးပြုနည်း။ လူငယ်များအကြိုက် အင်္ဂလိပ်သီချင်းမြူးမြူးလေးများတင်ပေးထားပါသည်။ထိုသီချင်းများကို Click လုပ်ပီးနားဆင်လို့ရပါသည်။အကယ်ရ်ျမိမိကြိုက်နှစ်သက်သောသီချင်းများပါရှိပါက Youtube Video မှ Mp3 သို့ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်မည့် နည်းလမ်းကိုပါထည့်ပေးလိုက်ပါသည်။ ပထမဦးစွာ Youtube to Mp3 Converter Softerware Download လုပ်ရန် ကျုနေရာကိုနှိပ်ပါ ။ထို့နောက် စာမျက်နာတစ်ခုပေါ်လာလျှင် အစိမ်းရောင်အကွက်လေး DOWNLOAD NOW ကို နှိပ်ပါ။Download Run ရန်ဘာမှမပေါ်လာပါက Tool bar အပေါ်တွင်စာတန်းလေးတခုပေါ်လာမည်။ထိုအခါ Right Click … Continue reading →